SXAE-412 si buuxda u qalabsan 4 qalabka daabacaadda midabada sawirada (mashiinka qalabka)-sxaequipment-Gofair Chinese China Manufacturer Supplier Factory
Somali SXAE-412 si buuxda u qalabsan 4 qalabka daabacaadda midabada sawirada (mashiinka qalabka)
Magaca alaabta: si buuxda automatic CNC 4 Mashiinnada daabacaadda muraayadaha mashiinnada (mashiinka qalabka)
qalabka isgaadhsiinta, muraayadaha, muraayadaha, dhalooyinka, koobabka dhalooyinka, koobabka, shoolada iwm.
1. Nidaamka gawaarida ee automatic, robot servo oo badan.
2. Muujinta nidaamka miiska, saxsanaanta ugu fiican.
3. Nidaamka daabacaadda ee automatic, dhammaan adeegaha loo riixo: madaxa daabaca, mesh frame, wareegga, weelka kor u kaca / hoos u dhaca, oo dhan oo ay ku kacaan mootooyinka adeega.
4. Dhamaan jigsiyada leh mootada shakhsiyeed ee shakhsiyadeed, oo loogu talagalay wareegga.
5. Isbeddel degdeg ah oo sahlan, oo ka yimaada hal shey oo kale. Isku habee xayeysiisyada si sahlan oo shaashadda.
6. Nidaamka ciribtirka UV-da, waqtiga dheer ee nolosha, keydinta tamarta.
7. Gawaarida si toos ah, robot servo.
8. Hawlgalka nabadgelyada ee CE.
1. Madaxa waa la beddeli karaa, madax madaxa kulul, shaashad fara badan iyo shamac kulul.
2. Nidaamka sawir gacmeedka, oo loogu talagalay alaabta cylindrical, iyada oo aan lahayn diiwaangelin, si looga soo baxo xariijinta.
Xawaarida daabacaadda: 1800-2100 Qaybaha / saacadda (lagu hagaajin karo muuqaal kala duwan iyo muuqaal daabacan)
Aagga daabicidda: Wadada 30-90mm, Dhererka 80-220mm
Saameynta mashiinka: L 5400 * W 5000 * H 2400mm
Awooda: AC 380V, 3-Waji, 50Hz / 60Hz, 23Kw (UV caadiga ah), 5KW (LED UV)
awoodda sare iyo waxqabadka, cimri dhererka dheer, sii kordhiya wakhtiga wareeggaaga,
yareeyo kharashka shaqada, qiimaha wax ku oolka ah, heerka istaandarka ah. si sax ah u daabacaan sawirka iyo garaafka, qaliinka fudud, tayada sare leh si buuxda u qalabsan si buuxda oo toos ah CNC 4 qalabka daabacaadda ee mashiinka farsamada.
dharbaaxo oo si buuxda u qalabaysan 4 qalabka mashiinnada daabacaadda muraayadaha mashiinnada.
si dhakhso ah wax uga beddelka, wax soo saarka waxtarka leh,
nidaam-si buuxda oo si buuxda u automatic automatic nidaamka kumbiyuutar shaashadda kumbuyuutarrada badan.
daabac ku dhawaad ​​substrate kasta, adhesion wanaagsan iyo khadadka kartida ee daabacaadda,